“Be Prepared for Industry 4.0” (Contact : 09 5151008, 09 420099997) - Study Abroad
“Be Prepared for Industry 4.0” (Contact : 09 5151008, 09 420099997)
စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာဆက်နွယ်လာသည့်ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူသားအလားစွမ်းဆောင်နိုင်သည့် ဉာဏ်ရည် ပြောင်းလဲလာတဲ့ Industry 4.0 အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် မဖြစ်မနေတက်ရောက်သင့်သည့် ……
Be Prepared for Industry 4.0 (Contact : 09 5151008, 09 420099997)
Date: 19.6.2020 (Friday)
ယခုခေတ် ပြောင်းလဲလာတဲ့ စတုတ္တ စက်မှုတော်လှန်ရေး Industry 4.0 ကာလတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု့ နည်းပညာများသည် စက်ရုပ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များ၊ အင်တာနက်နှင့် ပတ်သတ်သည်များ၊ Cloud နည်းပညာများ၊ ကွန်ပျူတာများ စသဖြင့် အသုံးပြု၍ Smart factory များအဖြစ် ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းပညာခေတ်တွင် မွေးဖွားလာသည့် လူငယ်တိုင်းကလည်း ခေတ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲမှုများကို လေ့လာပြီး အဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုလာပါပြီ။
👉 ဒါဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးသွားမယ့် ” Be Prepared for Industry 4.0″ Online ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲလေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
နည်းပညာစိတ်ဝင်စားသူ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတို့အတွက် STUDY ABROAD Information Centre မှ ကြီးမှုး၍ စင်ကာပူနိုင်ငံ Management Development Institute of Singapore ၏ Head of School of Engineering & Technology ဖြစ်သူ Dr. Yieng Wei Tham ကို ဖိတ်ခေါ်၍ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ဗဟုသုတများစွာရရှိနိုင်ဖို့နှင့် Industry 4.0 ပြောင်းလဲမှု့အတွက် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် Online ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကို ကျင်းပပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
✍️ ဒါကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ Industry 4.0 အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?
👉 တဟုန်ထိုးတိုးတက် လာနေသော နည်းပညာနှင့်အတူ New Digital Economy ၏ ဆန်းသစ်တီတွင်လာမှုများ ကြောင့် ရရှိနိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ကို သိရှိနိုင်ဖို့ ….
“Be Prepared for Industry 4.0”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပေးသွားမည့် ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။
စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် Be Prepared for Industry 4.0 Online ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို register လုပ်ပြီး အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်တာတွေကို အသေးစိတ် သိရှိနိူင်ဖို့ STUDY ABROAD Information Centre ရုံးဖုန်း 09-5151008 ,09-420099997 သို့ အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်ရှင်။ အခုပဲ နည်းပညာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ ရှေ့ဆက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများစွာရနိုင်မှာဖြစမလို့ အချိန်ပေးပြီး ဒီ Be Prepared for Industry 4.0 Online ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ အခမဲ့ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းကြရအောင်။
PSB Academy Online Counselling Day (Contact : 09 5151008, 09 420099997)How To Create A Powerful Portfolio (Contact : 09 5151008, 09 420099997)